exa: imwe nzira yemazuva ano kune iyo ls yekuraira zvinyorwa mukati Linux Vakapindwa muropa
ls, cd, pwd, kati, cp, mv, rm, mkdir, ... vari zvishandiso zvakakurumbira ayo anoshandiswa rinenge zuva nezuva kana uchishandisa iyo terminal paLinux. Mazhinji acho ndeechinyakare, uye haana kushanduka kwenguva yakareba, nekuti vanozadzisa basa ravo zvakakwana uye havadi shanduko. Nekudaro, mazhinji acho ane dzimwe nzira dzemazuva ano kana kutsiva, senge exa.
Munyaya ye yekare, ndiwo murairo unogona kutsiva ls, asi uine zvimwe zvinhu zvazvino zvinogona kunge zvichinakidza izvo zvazvino zvinodiwa neLinux anoshanda masystem. Naizvozvo, zvakare iwo murairo kunyora zvirimo mumafaira uye madhairekitori enzvimbo yakatarwa, kunyangwe iine mabasa epamberi uye ari nyore kushandisa kupfuura ls kune mamwe makesi.
exa inoshandisa mavara kutora mhando yefaira iri, kana metadata yacho. Iyo inogona zvakare kucherechedza zvekufananidza zvinongedzo, zvakawedzerwa hunhu, mvumo, git mamiriro ekuratidzira (inonakidza kune vanogadzira), muti wekutarisa dhairekitori kudzokorora, nezvimwe.
Para isai pane yaunofarira GNU / Linux distroIwe unogona kuzviita pamwe nemaneja wepakeji, sezvo ichiwanikwa senge bhainari mune zvinyorwa zvekuwanda kwakawanda. Semuenzaniso, unogona kuyedza iyi mirairo zvinoenderana neyako distro (yeDebina / Ubuntu uye zvigadzirwa, Fedora / CentOS / RHEL, openSUSE / SUSE, Gentoo uye Arch uye zvigadzirwa zvichibva ipapo):
Kamwe yaiswa, unogona kushandisa bhuku rekuona kuti uone mashandiro, kunyangwe iri nyore kushandisa. Iyo syntax yakajairwa ndeiyi:
Semuenzaniso, yakaenzana ne ls ichave iri:
Izvo zvakaenzana ne ls -l ndeiyi:
Uye iwe unogona zvakare kunongedza kune yakatarwa faira kana dhairekitori sezvaungaita ne ls na:
Sezvauri kuona, hazvina kuomarara ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » exa: imwe nzira yemazuva ano kune iyo ls yekuraira zvinyorwa
Mune linux mint haina kuoneka, tsitsi ini ndichagara nechishuwo :(
Zvakanaka, exa mu lubuntu 20.04.2 haipo.
izvi chete zve 20.10 uye 21.04
Michael Angel Davila akadaro
Izvo zvakaenda pasina kutaura kuti inogona kuiswa ne apt kubva kuUbuntu vhezheni 2.10
Pindura Miguel Angel Davila
Iyo ls ine mavara zvakare, kwete kwete nekutadza.
–Color [= WHEN] isa colorize zvakabuda; WHEN inogona kuva 'nguva dzose' (default kana ikasiiwa), 'auto', kana 'never'; rumwe ruzivo pazasi